Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguFHU J&J Jolanta
I-villa itholakala eJura Krakowsko-Częstochowska, kwindawo ezolileyo nenoxolo, ejikelezwe ngamahlathi epine.Inika indawo yokuhlala eyi-80 m2 kwindlu yabucala, ixhotyiswe ngegumbi lokuhlala elinesofa, amagumbi okulala anebhedi ephindwe kabini kunye ne lokuhlambela. Kwimeko inxalenye evulekileyo kukho kwakhona iibhedi ezimbini enye. kukho Terrace, loungers ilanga, indawo ukosa. kukho echibini lokuqubha, Pizzeria, indawo yokutyela, ice-cream parlour km nje 2 kude. An indawo elisemagqabini nokunyuka kunye nokhenketho ngebhayisekile.
Inika igumbi lokuhlala elipholileyo elinegumbi lokuhlala elinesofa kunye negumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela, ishawari, kukho iibhedi ezimbini zabantu abangabodwa kwindawo evulekileyo, ikhitshi elinefriji, i-electric cooker, microwave, sandwich toaster, iipleyiti. , i-cutlery, izitya eziyimfuneko.
Indawo enomdla kwi-Kraków-Częstochowa Jura. Kufuphi kukho indawo yokuqubha, ipizzeria, iiparlors ze-ice cream, iivenkile, isikhululo sikaloliwe, iSanctuary yaseLeśniów, ikliniki yotyando lweplastiki.
Umbuki zindwendwe ngu- FHU J&J Jolanta
Ngexesha lokuhlala kwakho, ndibonelela ngoncedo ngayo nayiphi na imibuzo.
UFHU J&J Jolanta yi-Superhost
Iilwimi: Français, Polski, Русский